Ku saabsan UAE | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Ku Saabsan UAE
Boqortooyada Isutagga Imaaraatka (UAE) waxaa loogu dhawaaqay inay tahay wadan madaxbanaan 2-dii Diseembar, 1971, kadib markii Ingriisku ka tanaasulay xukunka. Imaaraadku wuxuu ka kooban yahay 7 Imaaraad, kuwaas oo kala ah Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, iyo Fujairah, iyadoo Abu Dhabi loo doortay inay noqoto caasimad.
Wadamada deriska ah ee Gacanka Faaris.
bulshada sii kordheysa
Mas'uuliyiinta federaalka ee UAE waxaa ka mid ah Golaha Sare ee UAE, oo ah awoodda dastuuriga ah ee ugu sarreysa dalka waxayna ka kooban yihiin hoggaamiyeyaasha toddobada Imaaraad, Madaxweynaha UAE, Madaxweyne ku-xigeenka, Ra'iisul Wasaaraha, Golaha Qaranka Federaalka, iyo Garsoorka Federaalka. .
Imaaraadku wuxuu ku yaal qaybta bari ee Jasiiradda Carbeed, taas oo ku fidsan qayb ka mid ah Gacanka Cumaan iyo xeebta koonfureed ee Gacanka Beershiyiinta. Dhanka galbeed iyo koonfurta dalka waa Sacuudi Carabiya, dhanka waqooyi waa Qatar, dhanka barina waa Cumaan. Wadanku wuxuu daboolaa ku dhawaad ​​82,880 km2, iyo Abu Dhabi in kabadan 87 boqolkiiba celceliska dhulka oo dhan.
Aagga waxaa markii hore degay badmaaxyaal badda ka dib oo diinta Islaamka qaatay qarnigii 7aad. Si kastaba ha noqotee, sanado badan, koox diineed diidmo ah oo loo yaqaan 'Carmathians', waxay dejisay sheikdom xoog leh, waxayna qabsatay Maka. Kala qaybsanaanta sheikdom, dadkeedu waxay noqdeen burcad-badeed.
Burcad-badeednimadu waxay u hanjabeen Muscat iyo Oman Sultanate horaantii qarnigii 19aad, taas oo ka careysiisay faragalintii Ingriiska oo dhaqan gelisey xabbad joojin qeyb ah 1820 iyo xabbad joojin joogto ah 1853. Sidaas darteedna Burcad badeedkii hore waxaa loo magacaabay Xeebta Trucial. Sagaalka dowladood ee Trucial-ka waxaa ilaaliyay Boqortooyada Ingriiska, inkasta,, looma maamulin sidii gumeysi.
Sanadkii 1971dii, Boqortooyada Ingriiska waxay ka baxday Gacanka Faaris, dowladaha Trucial-na waxay noqdeen federaal loo yaqaan United Arab Emirates (UAE). Si kastaba ha noqotee, Baxrayn iyo Cumaan, laba ka mid ah gobollada Trucial ayaa diiday inay ku biiraan xiriirka, taas oo ka dhigtay tirada gobollada toddobo. Heshiis difaaca milatariga waxaa la saxeexay Mareykanka 1994-kii iyo mid kale oo Faransiis ah 1995.
Imaaraadku wuxuu leeyahay cimilo kulul oo qoyan xeebta dhexdeeda xitaa xitaa way kulushahay oo qalalan tahay gudaha. Roobka celcelis ahaan celcelis ahaan 4 illaa 6 inji sanadkii, in kasta oo ay tani ku kala duwan tahay sanad ilaa sanad kale. Celceliska heerkulka bisha Janaayo waa 18 ° C (64 ° F), halka bisha Luulyo, celceliska heerkulku yahay 33 ° C (91 ° F).
Xilliga xagaaga, heerkulku wuxuu gaarayaa ilaa 46 ° C (115 ° F) xeebta iyo in ka badan 49 ° C (120 ° F) ama in kabadan oo cidlada ah. Dabayl loo yaqaan 'shamal' bartamihii-dhexe iyo bilowgii xagaaga xaggiisa dambe ee woqooyi iyo waqooyi-galbeed, oo wata ciid iyo boodh.
Dadka iyo Dhaqanka
Imaaraadku waxaay ku faaneysaa dulqaad iyo jaceyl dadka deegaanka ah, kuwaas oo si weyn ugu heellan caadooyinkooda iyo dhaqankooda da 'weyn. Dadkan maxalliga ahi waxay samaystaan ​​sagaalaad sagaalaad dadka deggan Emirates. Inta soo hartay badankood waa qurbo-joog iyo ku tiirsanaantooda, kuwaas oo Koonfurta Aasiya ay ugu badan yihiin.
Qayb muhiim ah ayaa sidoo kale ka mid ah Carabaha ka yimid dalal kale marka laga reebo Imaaraadka Carabta iyo Iiraan. Waqtiyadi ugu dambeeyay, dad badan oo Aasiyaanka koonfur-bari ah, oo ay ku jiraan Filipinos ayaa u haajiray UAE tiro aad u badan iyagoo raadinaya fursado shaqo oo kala duwan.
Qaybta ugu weyn ee dadku waxay ku urursan yihiin magaalooyinka oo idil iyo labada xeeba, in kasta oo degsiimada al-Cayn ee deyrarka al-Ayn ay sidoo kale ku kortay xarun weyn oo dadka ku taal.
Caadooyinka dhaqanka ee Imaaraatka carabtu waxay salka ku hayaan islaamnimada waxayna xiriir la leeyihiin adduun weynaha carabta, gaar ahaan dowladaha deriska la ah gacanka Faaris. Dalka waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay ku soo laabashadii Islaamka, in kasta oo diinta Islaamka ee ku taal Imaaraadku aysan u adkeyn sidii Sacuudiga. In kasta oo ay magaaladu sii kordhayso iyo bulshada sii kordhaysa, aqoonsiga qabiilooyinka ee Imaaraadku si xoog ah ayey u sii xoogaysanayeen.
Dhaqaalaha UAE waa dhaqaalaha batroolka ee batroolka, kaas oo inta badan ay soo saarto Emirate-ka Abu Dhabi. Waxay ka kooban tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee kaydadka saliida ee la xaqiijiyay ee adduunka, kaasoo si weyn uga qaybqaata miisaaniyadda qaranka.
Sikastaba ha noqotee, dhaqaalaha Imaaraatka Dubai waa mid ganacsi badan ku saleysan taas oo salka ku haysa saliid, waana sababta ay ugu adeegto inay noqoto xarunta ganacsiga iyo dhaqaalaha wadanka isla markaana wadanka ugu hogaamisa isbadal dhaqaale.
Wax soo saarka Beeraha ayaa inta badan saldhig u ah Raʾs al-Khaymah iyo Al-Fujayrah Emirates. Si kastaba ha noqotee, taasi wax badan kuma biirinayso badeecada guud ee gudaha waxayna shaqaaleeyaan wax ka yar toban meelood meel xoogga shaqaalaha.
Burj Khalifa waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu caansan dalka Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuuna leeyahay magaca dhismaha adduunka ugu dheer. Kaliya maahan inuu qabanayo cinwaankan, laakiin sidoo kale waa qaabdhismeedka ugu sarreeya ee adduunka, buugga indha indheeynta ugu sareeya adduunka iyo wiishashka safraya masaafada ugu dheer adduunka. Waa aragtiyo panoramic ah guud ahaan Imaaraatka Dubai iyo wixii ka dambeeya waa muuqaal u muuqda dalxiisayaasha badankood booqda.
Jebel Jais waa kan ugu sarreeya dalka Isutagga Imaaraatka wuxuuna ku yaal Emirate-ka Ras Al-Khaimah. Waagii hore, way adkeyd in la maro, laakiin mahadi maha wadada dib u soo noqoshada ee qalloocisa oo usii jeedda dhanka buurta dusheeda, way fududaatay in la galo sanadihii la soo dhaafay.
Louvre waa UAE madxafka cusub ee ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan. Waxay ku martaa booqdayaasha socdaal taariikhda aadanaha oo leh shey laga soo qaatay gees kasta oo adduunka ah iyo da 'kala duwan oo muujinaya sida dhaqamadu isugu xidhan yihiin. Madxafkan xiisaha badan wuxuu leeyahay dhammaan, laga soo bilaabo taariikhda hore ilaa da’da waaweyn ee boqortooyada iyo farshaxanka casriga ah. Dhismaha casriga casriga ah waa aragti lagu arki karo.
Iyada oo leh xeeb ballaadhan oo noocaas ah, maahan wax la yaab leh in Imaaraadku leeyahay xeebo aad u tiro badan. Qaar ka mid ah kuwan waxaa ka mid ah xeebaha magaalada ee ku teedsan xeebta Dubai oo la barbardhigo dhismayaasha aadka u sarreeya ee asalka ah, xeebaha ciidda dahabka ah ee xeebta-Abuurbi ay ka buuxaan xeebaha Abu Dhabi, min Ajman ilaa Emirate-ka Fujairah.
Xulashooyinka lama tirin karo. Sidoo kale, waxaa jira jaakado khaas ah oo ciid ah oo laga heli karo hoteello badan oo raaxo leh oo ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi, kuwaasoo ay kuwa aan-martida ahayn u adeegsan karaan khidmad maalin ah. Qaar badan oo ka mid ah meelaha dalxiiska lagu tago waxay bixiyaan cayaaraha-biyaha sida quusitaanka, boodboodka boodboodka, qiiq-jeexjeexyada iyo istaagista boodhka.